नेपाल आज | हामी सेटिङमा होइन, दक्ष भएर लाइसेन्स लिन सुझाव दिन्छौं (भिडियोसहित)
हामी सेटिङमा होइन, दक्ष भएर लाइसेन्स लिन सुझाव दिन्छौं (भिडियोसहित)
काठमडौं । पछिल्लो समय सवारी साधनको माग र प्रयोग ह्वात्तै बढेसँगै देशमा सवारी चालक (ड्राईभर) को समेत आवश्यकता महशुस हुन थालेको छ । एकातर्फ ड्राईभरको माग सहज रुपमा पूरा हुन सकिरहेको छैन भने, अर्कोतर्फ भरपर्दो र अनुभवी दक्ष चालकसमेत पाउन सकिएको अवस्था छैन । यसको गतिलो उदाहरण हो हाम्रोमा दिनहुँ जस्तो घट्ने सडक दुर्घटनाका घटनाहरु ।
सडकको दूरावस्था त एकातर्फ छदै छ त्यसमा पनि चालकहरु दक्ष अनुभवी नभईदिनाले सडक दुर्घटनाका घटनाहरु भइरहेका छन् । ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांकअनुसार विशेषतः दुई पाङ्ग्रे सवारी बढी सडक दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् ।
सवारी दुर्घटना न्युनिकरणका लागि दक्ष चालक आजको आवश्यकता हो । दक्ष चालक उत्पादन गर्न तालिक केन्द्रहरु पनि आवश्यक पर्छन् । काठमाडौंमा ड्राइभिङ सेन्टरहरु धेरै छन् । ति सेन्टरहरुले सिकाउने तौरतरिका फरक छन् । काठमाडौंको तीनकुनेस्थित ‘क्रियसन ड्रार्भिङ स्कुल’को पनि आफ्नै सिकाई विधि छ । जुन प्रभावकारी पनि मानिएको छ । यो केन्द्रका सञ्चालक हुन् दीपक तामाङ । तामाङ ड्राइभिङ सेन्टरबारे के भन्छन् त ? प्रस्तुत त नेपालआजले उनीसँग गरेको कुराकानीको सारः
कहिलेदेखी क्रियसन ड्राईभिङ्ग स्कुल शुरु गर्नु भयो ? यस्तो अवधारणा कहाँबाट ल्याउनु भयो ?
२०६७ सालदेखि क्रियसन ड्राईभिङ्ग स्कुलको शुरुवात भएको हो । यसको मुुख्य उद्देश्य तथा लक्ष्य भनेको ड्राईभिङ्ग सिक्न चाहनेहरुलाई सहज रुपमा स्कुटर, मोटरसाइकल तथा कार जीप सिक्ने वातावरण सृजना गर्ने र सिकाउने हो । हाम्रोबाट हजारौंको संख्यामा प्रशिक्षार्थीहरुले ड्राईभिङ शिक्षा प्राप्त गरेर सक्षम चालक बनेर गइसकेका छन् ।
पहिले ड्राईभिङ ट्रायल परिक्षामा अहिलेको जस्तो गा¥हो प्रणाली थिएन । साधारण ट्रनिङ्ग उकालो ओरालो र अगाडि पछाडि भन्ने हुन्थ्यो । तर अहिलेको नियममा आधुनिक मोडल एल, एट राउण्ड, उकालो ओरालो जस्ता कठिन नियम आएको छ । यस्तो नियम सितिमिति सबैले पार गर्न सक्दैनन् । सामान्य तयारीले ट्रायल कट्ने सम्भावना रहदैन । त्यसका लागि विशेष टे«निङ्गको आवश्यकता पर्दछ । यहि आवश्यकतालाई चिर्ने अभिप्रायले हामीले यो ड्राभिङ्ग स्कुलको शुरुवात गरेका हौं । मुख्यत टे«निङ्ग वा प्रशिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले स्कुलिङ प्रणालीबाटै अघि बढ्ने हेतुले ड्राईभिङ स्कुलको अबधारण ल्याएका हौं ।
पछिल्लो समय यस्ता ड्राईभिङ्ग टे«निङ्ग सेन्टर तथा ड्राईभिङ्ग स्कुलहरु धेरैमात्रामा खुलेका छन् । यी बीचमा तपाईको स्कुल कसरी भिन्न मान्नु हुुन्छ ?
निश्चयनै । आजभोलि गल्लीगल्लीमा सयौंको संख्यामा यस्ता ड्राईभिङ्ग ट्रेनिङ्ग सेन्टरहरु खुलिरहेका छन् । त्यसो त त्यो आजको माग पनि हो । तर हामीले यस्ता सेन्टरहरुको संख्यामा भन्दा पनि प्रभावकारितामा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । ती बीचमा क्रियशनको आफ्नै खालको बजार प्रतिष्ठा रहेको छ ।
त्यो हामीले दिने सेवाबाट मुल्याङ्कन हुन्छ । आज जोकोही हामीकहाँबाट टे«निङ्ग लिएर जानु भएको छ । सफल हुनुभएको छ । कमै मात्रामा असफल भएका उदाहरण छन् । त्यसैले पनि धेरैले क्रियशनलाई रुचाउने गर्छन् । हामीले त्यस्तो वातावरण प्रदान गरेका छौं ।
क्रियशनको प्रशिक्षणमा त्यस्तो के छ भिन्नता र प्रभावकारिता ?
ट्रेनिङ्ग त सबैले नै दिन्छन् । तर त्यसको प्रभावकारिता कत्तिको भन्ने हुुन्छ । त्यसलाई हामीले पूर्णतः आत्मसात गरेका छौं । हामीले हाम्रा प्रशिक्षार्थीलाई केबल ट्रायल केन्द्रित प्रशिक्षण मात्र दिदैनौं । यसका साथमा बाहिरी वातावरण अर्थात् सडकको वातावरण समेत प्रदान गर्छौं । उहाँहरुलाई सडकमा नै लगेर व्यवहारिक प्रशिक्षणसमेत दिने गरिन्छ । यसले ड्राईभिङ्ग सिकाईको थप प्रभावकारिता देखिन्छ । भोलि उसले ट्रायल पास गरेर निर्धक्क सडकमा सवारी हाक्न सक्छ । हामी प्रशिक्षार्थीलाई यस्तो व्यवहारिक शिक्षा प्रदान गर्छौं । त्यसैले अरु भन्दा हामी अलि भिन्न छौं ।
आजको दिनमा ट्रायल पास गर्नु ठूलो चुनौतीको विषयमा हेर्ने गरिन्छ । एउटा सिकारु ड्राईभिङ्ग परिक्षार्थीलाई सहज र सहज तरिकाले ट्रायल पास गर्ने उपाय केके हुन सक्छ त ?
तपाईले राम्रो प्रश्न गर्नु भयो । हो आजको दिनमा सवारी चालक अनुमतिपत्र(लाईसेन्स) प्राप्त गर्न ट्रायल परिक्षा पास गर्न अति नै गा¥हो छ । यसलाई परिक्षार्थीको चुनौतकिै विषय मान्ने गरिन्छ । तर यसो भन्दैमा हामी कसरी लाईसेन्स प्राप्त गर्न सक्छौं र ? त्यसैले कसरी सहज र सरल रुपमा ट्रायल पास गर्नसकिन्छ भन्ने तर्फ लाग्नु उचित हुुन्छ । त्यसका लागि हामीमा सामान्य ट्राफिक नियमदेखि व्यवहारिक ज्ञानको समेत राम्रो लेखाजोखा हुनु पर्ने हुन्छ । आजको दिनमा सवारी चलाउन जानेर मात्र पुग्दैन ।
सामान्य देखि गहन ट्राफिक नियमको समेत ज्ञान हुन जरुरी छ । त्यसमा सडक र सडकको नियमको बारे बुझ्नु नितान्त आवश्यक छ । कुन लाईन के हो, संकेत के हो, कहाँ जान हुन्छ, कहाँ हुन्न भन्ने कुरा एक कुशल चालकले जान्नै पर्ने विषय हो । ट्राफिक नियम त पढेर जान्न सकिएला तर व्यवहारिक पाटो भने प्रयोग गरेरै सिक्नुु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि हामी सडकमै निक्लनु पर्छ । त्यो पनि सवारीका साथ । यसले हाम्रो सिकाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ ।
हामीले सिकाईलाई कहिल्यै गहन रुपमा लिनुहुदैन । तर धेरै हल्का रुपमा पनि हेर्नु हुदैन । हुन त लिखित परिक्षा पनि कम्तिको सहज भने छैन । धेरै परिक्षार्थीहरु लिखितमा फेल हुने गरेका पनि छन् । हामीले सबै परिक्षालाई प्रभावकारी शिकाई र गहन बुझाईबाट सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । अनि सफल भईन्छ ।
आजभोलि ड्राईभिङ ट्रेनिङ्ग सेन्टरहरुले नै प्रशिक्षार्थीको ट्रायल पासमा ग्यारेन्टी दिन्छन् रे नी । यसमा तपाईको के विचार ?
ड्राईभिङ्ग ट्रायल परिक्षामा त्यस्तो कुनै ग्यारेन्टी वारेन्टी भन्ने हुँदैन । यो त स्वयं प्रशिक्षार्थीमा भर पर्ने कुरा हो । उसले ट्रायल परिक्षामा कुशलता देखाएन भने कसरी ग्यारेन्टी प्रदान गर्न सकिन्छ ? फेरी व्यक्तिको व्यवहारिक ज्ञानले मात्र हुने होईन उसको चलाखी र सैद्धान्तिक ज्ञानको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । त्यसका प्रशिक्षक र प्रशिक्षण केन्द्र त उसको गाईड लाईन मात्र हुन्छ । मात्र उलाई राम्रो ज्ञान प्रदान गरेर परिक्षामा पठाउने हो । बाँकी त आफैले कुशलता प्रदर्शन गर्ने हो ।
अनि बजारमा एक खालको हल्ला सुन्ने गरिन्छ, ट्रायल परिक्षामा सेटिङ्ग हुन्छ भनेर । यस विषयमा चाहिँ तपाई के भन्नु हुन्छ नी ?
यस विषय प्रति म अनविज्ञता छु । मलाई यसबारेमा त्यति ज्ञान भएन । तर बजारमा यस्तो हल्ला नसुन्ने गरेको भने होईन । ट्रायल परिक्षामा सेटिङ्ग हुन्छ, पैसा खुवाएर पास गराईन्छ भन्ने जस्ता हल्लाहरु यदाकदा सुन्ने गरिन्छ । यो गम्भिर विषय हो । हामीले अहिले सम्म यस्तो गलत क्रियाकलाप गरेका छैनौं र गर्ने पनि छैनौं । किनकी यस्तो काम गर्नु भनेको आफैमा गलत हो । यस्तो गैरकानुनी र गैरजिम्मेवार काम कोहि कसैबाट हुनु हुँदैन । यस्तो काम निन्दनिय छ । यसमा हाम्रो सधै विमति रहन्छ ।